Codex Action Cam သည် DP Phedon Papamichael ASC GSC အတွက်ဗျာဒိတ်တော်တစ်ခုကိုသက်သေပြခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Codex Action Cam DP Phedon Papamichael ASC GSC သည်တစ်ဦးကဗြာထေူ
Codex Action Cam 4K နှင့်အတူအလွယ်တကူအသစ်သောဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ရိုက်ကူး Blend ဖွ
Codex (www.codexdigital.com) ဘယ်လိုအော်စကာအမည်စာရင်းတင်သွင်းရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်, Phedon Papamichael ASC GSC ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်သစ် Infiniti QX50 ဇိမ်ခံကျစ်လစ်သိပ်သည်း SUV ကားများအတွက်တီဗီအမှတ်တံဆိပ်ရုပ်ရှင်အပေါ်, Dual Codex Action Cam အမှတ်တပ်ဖြန့် shoot နှင့်စံချိန် packages များ။ မိမိကိုမိမိ footage လက်ကိုင်တည်နေရာနှင့်လမ်းရိုက်ကူးဖို့အလွန်သေးငယ်သော Codex လှုပ်ရှားမှု Cams အသုံးပြုခြင်း, Papamichael အသစ်ရှာတွေ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ဖန်တီးမှုရိုက်ကူးရေးဖြစ်နိုင်ခြေရှာဖွေတွေ့ရှိ, နှင့်အရည်အသွေးမြင့် Action Cam ပုံရိပ်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အဓိကကင်မရာကနေ 4K ရိုက်ကူးနှင့်အတူဿုံကြားဖြတ်ကြောင်း ။ ကုမ္ပဏီရိုးရှင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထက်ပိုမိုအပေါ်နေကြပါတယ်အဖြစ် Codex Action Cam, NAB 1817 မှာ Codex တဲ (C2015) အပေါ်အထူးများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
အကောင်းဆုံးသူ့ကို 2014 အတွက်အော်စကာအမည်စာရင်းတင်သွင်းဆောင်ခဲ့သောသားမြေးတို့အပါအဝင်ရုပ်ရှင်များ, မတ်လ၏ Ides, အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးယောက်ျားနှင့် Nebraska အပေါ်မျက်နှာပြင်ကြီးရုပ်ရှင်ပညာလူသိများသူ Papamichael, မကြာခဏသူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုခမ်းနားထည်ဝါစွာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကြော်ငြာ, ရိုက်များနှင့်ညွှန်ကြား နောက်ဆုံးပေါ်ဂီယာကွဲပြားယခုအချိန်တွင်ထွက်စမ်းပါ။ ဒါဟာသူ Codex လှုပ်ရှားမှု Cams ထည့်သွင်းအဆိုပါ Infiniti QX50 များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ရုပ်ရှင်သေနတ်နှင့် Co-ညွှန်ကြားကြောင်းကိုသွေးကြော၌ရှိ၏။
ရုပ်ရှင်များတွင်တရုတ်စူပါစတား, Archi Kao နှင့် Zhou xun, ပုံမှန်ကားကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခြိုးဖောကျသဖြင့်, အသစ်သော SUV ကားအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်အရသာရဖို့ဆုံးဖြတ်သောသူသည်စုံတွဲတစ်တွဲဖော်ကျူး။ ဆိုင်ကယ်ပေါ် paparazzi များက လိုက်. သူတို့ Griffith ကပန်းခြံ off-လမ်းကိုသွားနေဖြင့်လိုက်စားရှောင်ရှိရာ Griffith ကစောင့်ကြည့်ဖို့ထွက်ပြေး။ အခွားသောမြင်ကွင်းများမိမိတို့၏ဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, US မှာရှိတဲ့ Mojave အနီးတွင်အမြင့်ဆုံးသဲကန္တာရထဲမှာပစ်ခတ်ခြင်း, Jacob Zuma ကိုသဲသောင်ပြင်မှာမြောက်ဘက်သူတို့ကသဲပေါ်မှာ frolic ဘယ်မှာ Malibu ၏ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာစိတ်ပျက်ညွှန်ကြားရေးမှူးသူတို့ရဲ့ escapades ၏ဆဲလ်ဖုန်းရိုက်ကူးမှာကြည့်ရှိရာ soundstage မှကားကိုပြန်သွားပါ။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Bullitt မှတဆင့် Jaume Collet-Sera အားဖြင့်ညွှန်ကြားထားခဲ့သည်။ Papamichael ယာဉ်၏အလှဇာတ်စင်-အလုပ်ပါဝင်ပတ်သက်ရသောငါးရက်ကြာရိုက်ကူး၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်တာဝန် directing လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် Burbank အတွက် CamTec ပေးကိရိယာတန်ဆာပလာ, နှစ်ခုအနီရောင်နဂါးကင်မရာများ, တစ်ဦး Panasonic က Lumix GH4 တစ်ခု Edge မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကရိန်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သုံးပါဝင်သည် ကို Canon အချိန်-ချုံးရိုက်ကူးရိုက်ကူး 6Ds ပေါင်းနှစ်ခု Codex လှုပ်ရှားမှု Cams ။
"ကျနော်တို့ကအစပိုင်းမှာကားတစ်စီးလိုဂို / တံဆိပ်ရိုက်ချက်များနှင့်အခြားရွေ့လျားအသေးစိတ်ကိုခရီးသွားဘို့ငါတို့ကင်မရာအထုပ်ဖို့ Codex လှုပ်ရှားမှု Cams ကဆက်ပြောသည်" ပထမဦးဆုံး AC အက Jeff Porter ကပြောကြားခဲ့သည်။ Phedon နှင့် Jaume သင်စာသားသင်၏လက်၏စွန်ပလွံအတွက် Action Cam ဦးခေါင်းကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင် "ဒါပေမယ့်သူတို့ဆော့ကစားချင်တယ်။ သူတို့ကသရုပ်ဆောင်တွေဟာ Infiniti SUV ကားအတွက်ကားမောင်းအတူ unscripted, အလိုအလျောက်အချိန်လေးရိုက်ကူးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တော်မူ၏။ "
သို့သော်ကားအတွင်းပိုင်းကန့်သတ်အာကာသကင်မရာအော်ပရေတာသို့မဟုတ်အာရုံစိုက် pullers အဘို့အဘယ်သူမျှမကအခန်းရှိခဲ့သည်ဆိုလိုသညျ။
အကျိုးဆက် Papamichael နှင့် Collet-Sera သေးငယ်လက်ကိုင်မော်နီတာပေးခဲ့, အလျင်အမြန်ကို Codex ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေး Recorder ကိုလည်ပတ်ပုံညွှန်ကြားထား။
"ကျနော်တို့ကစာသားတဦးတည်းလက်နှင့်အတူကင်မရာများကျင်းပနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ကားမောင်းသှားသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူ" Papamichael ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကဤအသေးစားကင်မရာကိုအသုံးပြုသောကြောင့်, ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်ရနိုင်ခဲ့ကြတယ်တစ်ဦး 100 မိနစ် drive ပေါ်တွင် set-ups 30 ။ ဒါဟာအကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ကျောပလ္လင်မှငါပြတင်းပေါက်ကထွက် Action Cam ကိုင်နိုင်နှင့်ရှေ့ထိုင်ခုံ၏ဘေးပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့်ညွှန်တစ်ဦးအိမ်ရှင်မ-ဗန်း-type အမျိုးအစားကိုပစ်ခတ်ရတဲ့။ ငါကားကိုပိုကျနှငျ့အနောက်ဘက်-အမြင်မှန်ထဲမှာမင်းသမီး '' ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရနိုငျသညျ။ ကျနော်တို့လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင့် winging ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာလှုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်တယ်တွေအများကြီးရှိရဲ့, ဒါပေမယ့်ဒါဟာကျိန်းသေကျနော်တို့မဟုတ်ရင်ဆည်းပူးကြပါပြီဘယ်တော့မှနိုင်ကြောင်းအချို့သောအသုံးဝင်သောရိုက်ချက်များအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
Codex Action Cam 60fps အထိရိုက်မယ့်သေးငယ်တဲ့ဝေးလံသောကင်မရာကိုဦးခေါင်းသည်။ ကို Codex ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေး Recorder ဖို့တစ်ခုတည်း Co-ပုဆိန် cable ကိုအတူ, တကသက်သေလုပ်ငန်းအသွားအလာကယ်တင်တတ်၏။ ဒါဟာ2×3ဖမ်းဆီးဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှပ်တာနဲ့ 1920 / 1080 "Single-chip ကိုအာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသည် HD ကျယ်ပြန့် dynamic range ကိုအတူပုံရိပ်တွေ။ Papamichael ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်း Cine မျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူ Action Cam ရဲ့ Compatibility ကိုတန်ဖိုးထား - ဤအမှု၌သူတစ်ဦးက C-mount-to-PL-mount adapter နဲ့, စူပါ 16-format ကို Zeiss SuperSpeed ​​များအတွက်ရွေးချယ်။
"ကျနော်တဦးတည်းကိုလက်ညှိုးနှင့်အတူမျက်ဝန်းလှိမ့်နိုင်," Papamichael ကဆက်ပြောသည်။ "ဒီနည်းနည်းမော်နီတာငါ၏အပေါင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းခဲ့ငါဒီဂရီမှငါ့ကိုယ်ပိုင်အာရုံစိုက်ဆွဲထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါကပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပုံရိပ်အထဲကအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ဦးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲကလာချင်ပါတယ်ငါမျက်ဝန်းကိုပိတ်ထားလှိမ့်ချင်ပါတယ်ရလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့သောရိုက်ကူးအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မတိုတောင်းသောတည်းဖြတ်အတူငါတို့ပစ်သတ်သည့်အနီရောင်ရိုက်ကူးနှင့်အတူတော်တော်လေးကောင်းစွာပေါင်းစည်းမည်ကိုစဉ်းစားတယ်။ Action Cam သင်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးပေးသည် - ကဆက်ဆက်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်ပျော်စရာ option ကိုဖွင့် "။
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု Cams 1920 Codex Tech မှနစ်ခ် Lantz 1080-bit မှာ DPX ဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲကြောင်း 10 ပုံရိပ် x မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ စီးပွားဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သည်အတိုင်း Papamichael တခါတရံ 25fps အထိပစ်ခတ်ပေမယ့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, 50fps တစ်မှုနှုန်း, အဘို့အလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။4ချုံ့: အဆိုပါအနီရောင်ကင်မရာများ5နှင့်အတူ 1K resolution ကိုအနည်းဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူဖို့ကို set up ခဲ့ကြသည်။ Papamichael သူသူတို့အိုးပေါကျကှဲသှားရာလမျး likes ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Optimo တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်ဤကင်မရာများအပေါ် zooms ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
"ကို Codex လှုပ်ရှားမှု Cams တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုနောက်တွဲယာဉ်နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်ကင်မရာကအော်ပရေတာနှင့်အတူအောင်မြင်နှင့်ရှေ့ထိုင်ခုံသို့ကုိုကြည့် puller အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပါဘူးနဲ့အတူ Phedon နှင့် Jaume Archi နှင့် xun ၏ဖမ်းမိသောလှပသောအချိန်လေး" ပေါ်တာကပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒီပုံရိပ်တွေကိုရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်။ ယခင်ကားတစ်စီးနှင့်ဆိုင်ကယ်ကြော်ငြာများအတွက် Phedon နဲ့ကျွန်မထိုကဲ့သို့သော Novo 2K, BlackMagic Pocket ကင်မရာနှင့် GoPros ကဲ့သို့သောအခြားသေးငယ်တဲ့ကင်မရာ, အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒါပေမယ့် Codex Action Cam ဝေးနေဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အံ့သြဖွယ်ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်အလင်းစွမ်းရည်အပြင်ကလုံးဝနီးပါးကျနော်တို့ကားများတုန်ခါသို့မဟုတ်ပေါ်ကိုလှိမ့ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်နှင့်အတူကင်မရာများတပ်ဆင်ထားကြသည့်အခါကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ wobble- သို့မဟုတ် Jello-effect ကိုဖယ်ရှားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှပ်တာရှိပြီးဤကင်မရာ၏တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်ကယ်။ "
Papamichael အဆိုပါ Huntsman, အမ်မလီတုံး, ဂျက်စီကာ Chastain, Chris Hemsworth နှင့် Charlize Theron သရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ညီအစ်ကိုများ Grimm-based feature ကိုရုပ်ရှင် prepping လန်ဒန်မြို့တွင်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
Codex က high-performance ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools တွေကိုလွတ်လပ်သောအားဖြင့်အလုပ်နှင့် ဟောလိဝုဒ် ရွေ့လျားမှုပုံများ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရိုက်ကူး High-end TV နဲ့စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့ဒီဇိုင်း, ကုမ္ပဏီ၏နာမည်ကျော်ထုတ်ကုန်အစုစုလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု post မှကင်မရာကိုကနေတဆင့်ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေနဲ့ပုံရိပ်တွေ၏အပြောင်းအရွှေ့ချောမွေ့ကြောင်းမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များလည်းပါဝင်သည်။ သူတို့ကအစအရောင်နေ့စဉ်သတင်းစာများဖန်ဆင်းခြင်း, သိမ်းဆည်း, ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဦးဆောင်-အစွန်း tools များပါဝင်သည်။ Codex အတွက်ရုံးများနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်-ကျင်းပကုမ္ပဏီ, ဗြိတိန်, ဖြစ်ပါတယ် Los Angeles မြို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ပဲရစ်, ဘေဂျင်းနဲ့ Wellington, ပေါင်းရောင်းအားမိတ်ဖက်။ Codex သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက် trailblazing toolsets နှင့်စွမ်းရည်များနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ပြီး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်ဍာအဘို့ဘားမြှင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ www.codexdigital.com.
4K action Cam ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Codex NAB 2015 Papamichael Phedon post ကိုထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-03-31
ယခင်: NAB မှာ Cantemo Portal ကို 2.1 ၏ Sneak ကို Preview
နောက်တစ်ခု: SI ဗဟိုနဲ့အတူအမေရိကန်စျေးကွက်အောင်မြင်ပြီးနောက် RASCULAR'S ပဲ့ပွဲဦးထွက်တွင် AT NAB